Saaka & Xubintii Ciyaaraha iyo cRx Yameni: Neymar Jr waa PSG Dab Lacageedna waa Shiday! (akhri + dhegayso) – Radio Daljir
Agoosto 4, 2017 2:14 b 0
Naymar waxa uu saacado kahor ku biiray kooxda PSG ee Faransa. In kasta oo gadashada Neymar ay war ka soo celiyeen La Liga, hadana maamulka PSG ayaa meeshii uu lacagta madaxfurshada (transfer fee) Neymar La Liga ku wareejin lahaa si toos ah €222 milyan ku wareejiyey kooxda Barca.
Neymar oo saacado kahor sheegay in uu yahay xubin PSG, guulana u soo hoyin doono Kooxda, ayaa la sheegayaa in canshuur kabacdi uu sannad walba heli doono mushaar saafi ah oo dhan €30 milyan Yuuro, waxa kale oo uu isla maanta qaatay abaalmarin kor u dhaaftay sannad mushaarkiisa ama inta la qiyaasayo ku dhawaad €40 milyan oo Yuuro.
Neymar oo Barca u xiranjiray lambarka 11 ayaa PSG ku hawlgali doona lambarka 10. Javier Pastore oo xiranjiray PSG’s No. 10 ayaa u wareegaya No. 27.
Saxiixa PSG ee Neymar ayaa meel kasta qaylo ka soo yeertay, ayada oo dawladda Faransa lagu eedeeyey in ay tahay jeeb aan marna maran, lana mid ahayn kooxaha kale ee Yurub. Waxaa kale oo isla maanta ururka UEFA laga codsaday in ay xisaabixilmaleh la dabagasho PSG. Rag waa lacag dheh …!
Tabaraha kooxda Arsenal Arsene Wenger ayaa kooxda PSG ku eedeeyay in ay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda u isticmaalayso lacag xad dhaaf ah ayna samayn ku yeelatay kubbada cagta wuxuu sheegay in heshiiska Neymar uu gabi ahaanba badalayo qaab dhismeedka kubbada cagta, isaga oo carrabka ku adkeeyay in koox uu wadan dhami maamulayo ay wax kastaaba suurtogal u yihiin.